दशैमा मुख्या नेता र मन्त्रीको घरमा दर्जनौ खसी ढालिन्छन सांसदको दसैँ भत्ता समेत कटाउनु पर्ने ? साँसद रामनारायण बिडारी:: Mero Desh
दशैमा मुख्या नेता र मन्त्रीको घरमा दर्जनौ खसी ढालिन्छन सांसदको दसैँ भत्ता समेत कटाउनु पर्ने ? साँसद रामनारायण बिडारी
Published on: २६ आश्विन २०७८, मंगलवार ११:०३
रुपन्देहीका सुकुम्वासीलाई दसैँका बेलामै किन हि,र्काउनुपरेको दसैँमै उनीहरूलाई किन उठी,बास गराउनुपरेको ? दसैँपछि गर्न हुँदैनथ्यो त्यो ?गैर सांसदलाई मन्त्री बनाउनुहुँदैन भनेर सुरुदेखि नै भनेका थियौँ । फेरि किन गैर सांसदलाई नै मन्त्री बनाउनुपरे को ? यो सरकार बिस्तारै अ,परा,धीको चङ्गुलमा पर्दैछ।